Day: February 7, 2019 - Kichuu
“Finfinneen kan Oromoo tahu Uummanni Itoophiyaa hundu beekuu. Ragaan dabalataa immoo heera mootummaati. Heerri mootummaa Finfinneen kan Oromoo fi Oromiyaa tahu lafa kaa’e jira. Heera mootummaa sana kan tumee immoo uummata Itoophiyaati. Kanaafuu, Finfinneen Kan Oromoo [Read More]
Metastasis with elusive primary By Dr. Baro Keno Deressa, February 7, 2019 The famous organized resistant against colonization in 21st century by Oromo sons and daughters called Qeerroo/Qarree and WBO under OLF leadership, devoted leadership [Read More]
የሶማሌ ክልል ምክር ቤት የቀድሞ የክልሉ ምክትል ርእሰ መስተዳደር ወ/ሮ ሱአት መሃመድን ጨምሮ የ12 አባላቱን ያለመከሰስ መብት አነሳ። ያለመከሰስ መብታቸው Mariin waldaa dargaggoota Arsii magaalaa Shaashamanneeti taa’ame. OBN Amajjii 27, 2011 – Mariin waldaa dargaggoota [Read More]